‘टाउकोमा कु ‘टे र आँखामा प’ट्टी बाँ’धे’छ, पछि कहाँ गएर आँखा खुल्यो ? कसरी फोन गर्न भ्या’ई ? – Life Nepali
‘टाउकोमा कु ‘टे र आँखामा प’ट्टी बाँ’धे’छ, पछि कहाँ गएर आँखा खुल्यो ? कसरी फोन गर्न भ्या’ई ?
राप्ती नगरपालिका–३ की ४५ वर्षीया अम्बिका भण्डारीका आँखा ११ दिनदेखि ओ’भानो भएका छैनन्। रुँदा–रुँदा आँखा राता भएका छन्। छिनमै भ’क्का’निन्छिन्, छिनमै चुप लाग्छिन्। शरीर कमजोर भएर टा’उकोमा फे’टा बाँ’धेकी छिन्।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
आफूलाई सम्हाल्नै सकेकी छैनन्। आफन्त र छिमेकी आउँछन्, सा’न्त्व’ना दिन्छन्। उनीहरू आँखाभरि आँसु बनाउँछन्। अम्बिकाले हराएकी छोरीको पिरलो भए पनि फेला पर्लिन् भनेर चित्त बुझाउँदै बसेकी थिइन्। तर, २३ वर्षीया छोरी सुजिता आइतबार मृ’त फेला परेको खबर पाएपछि उनी आफूलाई सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छन्।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
छोरी सम्झिँदै छाती पि’ट्दै रुन्छिन्। ‘मलाई बचाऊ ! म’लाई बचाऊ ! भनेर छोरीले रुँदै फोन गरेकी थिई। हामीले बचाउन सकेनौं’, उनले रुँदै भनिन्, ‘अ’प:राधीले त्यस्तो कुनामा लगेर त ड्पा ई–त ड्पा ई मा-यो।’ ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
Previous बिहे नगरी बच्चा जन्माउन मन छ, बिवाह त से’क्स गर्न लिइने लाइसेन्स मात्र हो : ज्योति मगर
Next अभिनेत्री गहनालाई हृदयघात, अहिले बे’होस भै कसैसँग बोल्न नसक्ने अवस्थामा